Ingabe Wake Wakhubeka? | Martech Zone
Ingabe Wake Wakhubeka?
NgoLwesithathu, uDisemba 31, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Uma uke waba ngumfundi lapha isikhashana, uyakwazi lokho Ngithandana neStumbleUpon. I-blog yami iyaqhubeka nokuthola i- inombolo ephezulu yezivakashi ngeStumbleupon.
Njengomthetho ojwayelekile, abantu abakuthandi ukuthi uzenzele amakhasi akho uqobo kumasayithi afana neStumbleUpon. Mina ngithumele okwami ​​okuthunyelwe ngaphambilini - kepha kuyaqabukela. Ukube bengicabanga ukuthi okuthunyelwe kunempikiswano noma kungathola ukunakwa okuningi ngomthelela wakho, nami ngingazikhubekisa. Ngaphandle kwalokho, ngethemba nje ukuthi abanye bazolithanda leli khasi bese belinikeza isithupha.
Lokho kusho, akukho lutho olungahambi kahle ngokubuyela emuva unikeze isithupha samakhasi abanye asebevele bakhubekile kuwo ngaphakathi kwewebhusayithi yakho. Uma uzama ukusesha isizinda sakho noma iwebhusayithi ngaphakathi kweStumbleUpon, uzothola ukuthi ukusesha kwabo kuhle kakhulu futhi kukhawulelwe kumathegi abasebenzisi abawagcwalisayo.
Inothi eliphansi: Ukube benginguStumbleUpon, bengizokwenza ngokuphelele sebenzisa i-Google Custom Search njengomthombo wemali engenayo.
Usebenzisa iGoogle, noma kunjalo, ungathola kalula ukuthi yimaphi amakhasi wesayithi lakho akhubaziwe ukuze ukwazi ukufaka ivoti elengeziwe! Ngebhulogi yami, ngivele ngifunele:
isayithi: khubbleupon.com martech.zone
Lokhu kunginikeza uhlu lwamakhasi ami abanye abakhubazekile ukuze ngikwazi ukuthola elinye ivoti. Ukuzenzela? Mhlawumbe - kepha ngincika lapho kulunge khona ngoba omunye umuntu usevele wabona ukuthi okuthunyelwe kufanelekile ukukhubeka.
Uma uku-StumbleUpon, qiniseka ukukwenza ngingeze njengomngani.
Dec 31, 2008 ku-11: 27 AM
Siyabonga ngalokhu okuthunyelwe. Ngangike ngazama ukukwenza lokhu ngaphambilini kepha angizange ngiyithole i-syntax yeGoogle noma okuthile. Futhi uqinisile; IStumbleUpon kufanele ithuthukise amakhono azo okusesha. Ngicabanga ukuthi kungakuhle futhi uma iStumbleUpon ikuvumela ukuthi ufune amabhulogi akho ukuze ukwazi ukubhalisela ukuvuselelwa noma kunini lapho othile akhubazeka elinye lamasayithi akho.
Jan 1, 2009 ku-4: 12 AM
I-Google ayiwatholanga wonke amakhasi esizeni sami athunyelwe ku-SU.
Njengawe, ngikholelwa ngokuqinile ku-SU njengoba inikela inani eliphakeme kakhulu lomgwaqo kubhulogi yami.
Jan 2, 2009 ngo-3: 13 PM
Ngisanda kubhalisela i-akhawunti ngoba wonke umuntu uthi indlela yayo enhle yokushayela ithrafikhi. Bengizulazula ngephrofayili yami futhi nginenkinga yokuqalisa, kubonakala kudida kancane. Ngabe uncoma noma yimiphi imihlahlandlela yokuhlola nokufunda ukuze uqalise kahle futhi ufunde ukuyisebenzisa?
Nov 3, 2009 ngo-10: 09 PM
Siyabonga, i-syntax yakho ye-google ibilusizo kakhulu. Kubukeka sengathi nginezinto ezimbalwa engizibhalile ku-SU, ngingaboni nje ithrafikhi 🙁
Nov 4, 2009 ngo-4: 00 AM
Ukuze usebenzise ngokunenzuzo iStumbleUpon, qiniseka ukuthi uphonseka lapho bese uyisebenzisa izikhathi ezimbalwa ngesonto ukukala amasayithi okhubeka kuwo. Lapho usuzakhele iphrofayili enhle, ngikholwa ukuthi umthelela wakho uzothuthuka. Ungamane ukhubekise amasayithi akho, noma kunjalo! Lokho kuzobe kunganakwa kakhulu.